အသံဖိုင် နားထောင်ရန်နှင့် ရယူရန်
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လိုင်ဇာမြို့အနီး ဒုက္ခသည်စခန်းကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးတွဲတီဆာက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
"သူတို့က ဧပြီ ၉ ရက်မှာ ဗန်းမော်ကနေ မိုင်ဂျာယန်အထိလာဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတယ်၊ ညနေပိုင်းရောက်တော့ နိုင်ငံခြားသား မိုင်ဂျာယန်သွားခွင့်ကို ပြန်တင်ပြမယ်"
အခုလာရောက်တဲ့ ယာဉ်တန်းဟာ UNOCHA ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကဦးစီးပြီး ကုလသမဂ္ဂကလေးများ ရံပုံငွေအဖွဲ့၊ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးနဲ့ ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီး အကူအညီပေးဖို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက ပစ္စည်းနဲ့ ရိက္ခာတွေ လာရောက်ပေးခဲ့ပြီး အခုဒုတိယအကြိမ် အဖြစ်လာရောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ဒေသနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းက ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေက အကူအညီတွေ ပေးပို့နေရာမှာ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဆီကို နိုင်ငံတကာ အကူညီပေးရေးအဖွဲ့တွေ သွားရောက်ရေးမှာ အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ ကူညီစောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေကို ဦးတင်အောင်ခိုင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်။
NO BRAIN ARMY. NO EDUCATED ARMY. SELFISH ARMY. PLEASE BE PUNISHED THEM WITH INTERNATIONAL LAWS. THEY ARE INHUMANE.
Apr 09, 2013 11:40 AM